Badidekile ngengane ‘eminzile’ | IOL Isolezwe
Badidekile ngengane ‘eminzile’
Isolezwe / 23 January 2013, 10:13am / NOKUBONGWA PHENYANE
UNKK Dudu Ngcobo waseNtuzuma elinde eduze kwesiziba emfuleni uGobhogobho okuminze khona ingane yakhe uLindani Dlamini (12) ISITHOMBE BONGANI MBATHA
ULINDANI Dlamini ominze emfuleni uGobhogobho ngaseNtuzuma
USADUNGUZA ebumnyameni umndeni womfana oneminyaka engu-12 osekuphele izinsuku eziyisikhombisa edukile okusolwa ukuthi waminza emfuleni oseduzane nakubo ngemuva kokuvukwa isifo sokuwa aphila naso.
ULindani Dlamini owahamba nabangani bakhe beyobhukuda emfuleni uGobhogobho, eNtuzuma, ushiye umndeni wakhe ukhungathekile njengoba kungekho owambona engena emanzini kodwa konke bakuzwa ngabanye abafana ayehamba nabo.
Lo mfana oyiwele bekulindeleke ukuthi ayofunda uGrade 5 eMuziwabantu Primary School. Ngokuthola kweSolezwe kuthiwa wahamba nezinye izingane beyobhukuda nokwathi sebebuyela emakhaya yena watshela ayehamba nabo ukuthi akakadeli ukubhukuda usazobuyela yedwa emfuleni.
Uma echaza unina walo mfana uNksz Dudu Dlamini uthi uLindani bekungeyena umuntu ongamshiya yedwa ngenxa yokugula kwakhe futhi ubedla namaphilisi abawalanda njalo esibhedlela iKing Edward.
“Ngavuka ekuseni ngahamba ngaya edolobheni. Ngayizolo ngangimthethisile ngoba ngangizwe kuthiwa bahamba baya kobhukuda, lapho wakhombisa ukuzwa kodwa ngenxa yokushisa kwelanga ngicabanga ukuthi babuyela njengoba la enhla komfula kukhona indawo abadlala kuyo ibhola,” kusho uNksz Dlamini.
Uthe ngesikhathi ebuya edolobheni akanakanga kodwa wabona ilanga lishona engaqhamuki wagcina embuza komakhelwane nabo bamlandula.
“Ngavuka ngaya ezinganeni ezazinaye zangitshela ukuthi uthe uzohamba ayobhukuda yedwa sisola ukuthi wavukwa wukugula esemanzini waminza,” kuchaza uNksz Dlamini.
Uqhube wathi sebeze bahamba kubantu abahlolayo befuna ukwazi ukuthi ngempela kwenzekani ngendodana yakhe, nabo babatshela ukuthi isemanzini.
Uthe okubakhathaza kakhulu ukuthi bahamba bayobika emaphoyiseni asebenza ngezinja kodwa awangenza lutho agcina ngokubuka umfula ahamba.
Nabatshuzi uthe nabo sebeke bafika kule ndawo kodwa abangazixaka ngokungena emanzini bagcina ngokubatshela ukuthi bazophinde babuye.
Uma uhamba kulo mfula kumele uqaphele njengoba unezinguzunga zamatshe, futhi uma uya la kubhukudwa khona kumele ungene emanzini ahamba ngesivinini esikhulu.
Okhulumela amaphoyisa uColonel Jay Naicker uthe lokhu okushiwo umndeni ukuthi amaphoyisa awafikanga kuleya ndawo kuliphutha njengoba eseqalile ngophenyo futhi nayizolo ebesaqhubeka nokuthungatha lo mfana.
Kwenzeka lesi sigameko nje umndeni wentombazane yaseMandeni osekunamasonto amabili yamuka nomfula uMzinyathi usenethemba lokuthi uzoyithola njengoba uvuka njalo unikele kulo mfula ukuyobheka ithambo layo.